प्रकाश सपूत र शम्भु राई जसले सामाजिक सञ्जाल देखी संसदसम्म हल्लाएFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
प्रकाश सपूत र शम्भु राई जसले सामाजिक सञ्जाल देखी संसदसम्म हल्लाए
फिल्मी फण्डा । सरकारले विज्ञापन ऐन २०७६ मार्फत विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल मात्रै प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानल सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि मंगलबार ३ बजेसम्मका लागि बन्द गरिएको थियो । सरकारले विज्ञापन ऐन २०७६ मार्फत विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) लागू गर्ने तयारी गरेसँगै इन्टरनेट तथा डिजिटल टीभी समन्वय समिति र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले २४ घण्टाका लागि विदेशी च्यानल बन्द गरेका हुन् । नेपाली र विज्ञापनरहित च्यानलको प्रसारण भने रोकिएको छैन । ऐन संसदमा विचाराधीन छ । ऐनमा राखिएको क्लिनफिड प्रावधानले पार्ने असर देखाउन २४ घण्टा च्यानल बन्द गरिएको र क्लिनफिड लागू हुँदा नेपालको केबल टीभी व्यवसाय धरासयी हुने महासंघले बताउँदै आएको छ ।
यस ऐनलाई सर्वसाधरण देखि कलाकारहरुले सकारात्मक कदमका रुपमा लिएका छन् । चलचित्र पत्रकार संघले स्वागतयोग्य भन्दै सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । संघद्धारा जारि विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
संसदमा विचारधिन विज्ञापन विधेयकमा क्लिन फिडको व्यवस्था गर्न लागेको बिषयलाई चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले स्वागत योग्य ठानेको छ ।
नेपाली कलाकारहरुलाई प्रथामिकता दिएर नेपाली बिज्ञापन प्रणालीमा जाने र नेपाली बिज्ञापन मात्र नेपालमा प्रशारण हुनुपर्ने धारणा विगतका दिनहरुमा यस संघले राख्दै आइरहेको सबैमा सर्वबिदितै छ ।
तसर्थ सदैव यस संघ क्लिन फिडको पक्षमा रहदै आएको छ । क्लिन फिडले नेपाली सञ्चार माध्यमहरुको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने र चलचित्र क्षेत्रका कलाकार, प्राविधिक , गित संगीत क्षेत्रमा लागेका सर्जक लगायत सिङ्गो क्षेत्रलाई नै लाभ हुने संघको विश्वास छ । विज्ञापन विधेयकमा क्लिन फिड व्यवस्था लागु गर्ने प्रतिबद्वता ब्यक्त गरेकोमा संघ सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
साथै संघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुको साथमा रहदै आएको छ ।
कलाकारहरु पनि नयाँ ऐनको बारेमा खुलेर आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्य क्लिन फिड नीति नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली उद्योग, नेपाली कलाकार, प्राविधिक सहित नेपाली विज्ञापन उद्योग सबैको हित हुनेछ भनेर उल्लेख गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्,– ‘नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरुमा प्रशारण हुने विदेशी विज्ञापन रोक्ने र विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल प्रशारण गर्न नेपाल सरकारले क्लिन फिड योजना लागू गर्न खोजेको छ । यसको विरोधमा टेलिभिजन च्यानलका विक्रेताहरुले २४ घन्टा विदेशी च्यानलहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । के यो विरोधले हामीलाई केही असर गर्छ ? नेपालमा प्रशारण हुने सबै विदेशी च्यानलहरु विज्ञापन रहित हुनु हाम्रो लागि राम्रो होइन र ? यसले नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली उद्योग, नेपाली कलाकार, प्राविधिक सहित नेपाली विज्ञापन उद्योग सबैको हित हुनेछ । एक पटक हैन, पटक पटक सोचौ । नेपाल सरकारको यो हिम्मतिलो निर्णयमा हाम्रो साथ छ । समर्थन छ । जय नेपाली विज्ञापन । नेपाली नेपाली कलाकार । जय नेपाली प्राविधिक ।’
यस्तै, नायिका करिश्मा मानन्धर लेख्छिन् –‘क्लिनफिड स्वागत योग्य । २४ घन्टा मात्रै होइन सकिन्छ भने दिगो हुनुपर्छ । विदेशी च्यानल हेर्न तल्लिन भएका हामीहरुको लागि केही समय अप्ठ्यारो पर्ला । हो, हामीलाई लाइभ विदेशी कार्यक्रम हेर्ने सुबिधाको लत परेको छ । तर, त्यो सुका बचाउँदा रुपियाँ गुमाए भने झै हुन्छ । दुरदर्शिता राख्यो भने यो देशको हितमा हुनेछ । हो, केवल च्यालनहरुलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ला । तर, केही नागरिकको फाइदा भन्दा देशको फाइदा सोच्नुपर्छ । यसो गर्दा हाम्रो देशभित्र बन्ने टेलिभिजन सामाग्री स्तरिय हुनेछन् । हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश सामाग्री विदेशबाट आयातित हुन्छ ती सामाग्रीहरुको विज्ञापन स्वदेशमै निर्माण हुनेछन् । सुन्दा सामान्य लागेपनि यो निर्णयले आर्थिक, सांकृतिक रुपमा पक्कै सकारात्मक असर पार्ने छ ।’
उता अर्का कलाकार जितु नेपालले पनि दीपकराज गिरीको स्टाटस सेयर गर्दै आफ्नो धारणा पनि सोही रहेको जनाएका छन् ।
सरकारले पहिलोपटक २०७३ साउनमा आमसञ्चार नीतिमार्फत क्लिन फिडको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त नीतिअनुसार नै २०७४ साउन १ देखि यो लागू हुने भनिए पनि टेलिभिजन वितरककै विरोधका कारण त्यति बेला स्थगित भएको थियो । अहिले नेपालमा करिब १५० वटा विदेशी च्यानल प्रसारण भइरहेका छन् । तीमध्ये भारतीय च्यानलको हिस्सा करिब ८५ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । भारतीय च्यानलबाहेक अन्य देशका कतिपय च्यानल अहिले विज्ञापनरहित छन् । भारतीय च्यानलमध्ये करिब आधा च्यानल ‘पेड’ छन्, जुन प्रसारणका लागि नेपाली टेलिभिजन वितरकले पैसा तिर्दै आएका छन् । त्यस्ता पेड च्यानलमा विज्ञापन राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनले गरेको हो । त्यसबाहेक कतिपय ‘फ्री टु एयर’ च्यानलहरू पनि नेपालमा प्रसारण भइरहेका छन्, जसको प्रसारण गरेबापत वितरकहरूले पैसा भने तिर्नुपर्ने छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रेम सम्बन्धकै कारण पूजा चर्चामा